Caro ka dhalatay yuhuud loo oggolaaday in ay ku tukadaan masjidka Al Aqsa : Calanka.com
Caro ka dhalatay yuhuud loo oggolaaday in ay ku tukadaan masjidka Al Aqsa
Garsoore Israa’iil ah ayaa xukumay in Yuhuudda ay si “aamus” ah ugu gudan karaan salaadooda dhismaha masjidka Al-Aqsa, oo ay si weyn u xushmeeyaan Muslimiinta, go’aankaasi oo horseeday caro ballaaran.
Al-Aqsa ayaa udub dhexaad u ah khilaafka Israa’iil iyo Falastiin, wuxuuna haatan ka mid noqday bariga Qudus ee ay Israa’iil maamusho, inkastoo uu misaajidka maamulo golaha arrimaha Islaamka ee Waqf.
Golaha Waqf ayaa xukunkii Talaadadii ee garsooraha maxkamadda Majisteraytka Qudus Billha Yahalom ku tilmaamay “daandaansi” aan sharci ahayn, halka ra’iisul wasaaraha Falastiin Maxamed Shtayyeh uu uga digay Israa’iil tallaabo kasta oo lagu dhaqan gelinayo go’aankaasi.
Xitaa bilayska Israa’iil ayaa racfaan ka qaatay go’aanka, kaas oo jawaab u ahaa codsi ka yimid, Aryeh Lippo, kaasoo 29-kii Sebtember lagu riday ganaax laba toddobaad ah oo looga joojiyay barxadda ka dib markii uu halkaas ku tukaday.
Golaha Waqf wuxuu si cagajiid ah u siiyaa Yuhuudda marin xaddidan saacadaha qaarkood, balse joogitaanka Yuhuuddu ee Al-Aqsa ayaa muddo dheer taagnaa iyadoo qaylo-dhaan guud ay soo dirayeen dunida Muslimka ah.
Ma jiro sharci Israa’iil oo ka mamnuucaya Yuhuudda in salaadda ay ku tukadaan misaajidka, oo ah goobta saddexaad ee ugu barakaysan Islaamka. Laakiin tan iyo 1967, sanadkii ay Israa’iil qabsatay bariga Qudus oo ay ku jirto Magaalada Qadiimiga ah ee Dagaalkii Lixda Maalmood, mas’uuliyiinta Israa’iil waxay meel mariyeen mamnuucidda salaadda Yuhuudda si looga hortago xiisadaha.
Garsoore Yahalom ayaa xukunka riday ka dib markii la sheegay in diiradda la saaray sidii meesha looga saari lahaa xayiraadda Lippo ee fagaaraha.
“Ma aanan helin in falalka diimeed ee uu fuliyay Lippo ay ahaayeen kuwo dibadda ah oo muuqda,” ayay xukuntay, iyada oo go’aamisay in salaadda caynkaas ah aysan “jebin tilmaamaha booliiska,” ayna joojiso mamnuucidiisii goobta.
Lippo oo ah ninka dacwadda soo oogay ayay, booliisku waxay sheegeen in uu ku kacay “dhaqan aan habboonayn oo ka dhacay goobaha dadweynaha.”
Hoggaamiyeyaasha muslimiintu waxay si isku mid ah u cambaareeyeen xukunkii maxkamadda Qudus.
“Salaaddaan waxay ka dhigan tahay daandaansi iyo xadgudub ka dhanka karaamada Al-Aqsa,” ayuu yiri agaasimaha masaajidka Sheekh Cumar al-Kiswani oo la hadlay Wakaaladda Wararka ee AFP.
“Go’aankan sidoo kale ma laha wax sharci ah maxaa yeelay ma aqoonsanin sharciga Israa’iil ee Al-Aqsa,” ayuu yidhi.
Ururka Iskaashiga Islaamka ee fadhigiisu yahay Sacuudi Carabiya ayaa si adag u cambaareeyay “go’aanka waxa loogu yeero ‘Maxkamadda Qudus’ ee Israa’iil.”
Qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha Yuhuudda ayaa dhanka kale wax weyn ka soo qaadin saamaynta go’aanka.